Halgame Cabdullaahi Maxamed Sheegow W/Q: Cabduqaadir Walaayo | Jubbaland Media Online
Halgame Cabdullaahi Maxamed Sheegow W/Q: Cabduqaadir Walaayo
Posted on August 8, 2016 in Feat, Opinions // 0 Comments
July 8th 2016 ayaan bartan soo dhigay inta aan ka aqiin is-barashadeeni ku dhoweyd nus qarni marka laga soo bilaabo abaaro 1968 markii aan isku soo gaarnay shaqada Wasaaradda Warfaafinta iyo Hanuuninta Dadweynaha.
Dib-u-qoristan waxaan uga jawaabayay codsi ay ii soo jeediyeen qaar ka mid ah asxaabteyda Face Book oo igu yiri bal wax nooga sheeg taariikhda Abdullahi Mohamed Sheegow.
Halgame Abdullahi Maxamed Sheegow waxaan is baranay muddo ku dhow 50 sano isagoo Radio Mogadishu ka ahaa waqtiyo kala duwan Wariye, Faalo Qore ilaa uu ka gaaray jagada Agaasimaha Radio Mogadishu iyo Agaasimaha Idaacadaha Soomaaliyed (Somali Broadcasting Service) xukuumadihii ray’dka bartamihi lixdameeyada ilaa tii waqtigi kacaanka. Wuxuu kaloo soo qabtay jagada agaasimaha Wakaaladda SONNA iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta.
Inta lagu jiray burburka wuxuu ahaa “activist” firfircoon ee hawlaha bulshada madaniga (Civil Society Organizations) gaar ahaan u ololeynta nabadda iyo is-dhexgalka bulshada.
Sannadku markuu ahaa 2000, waxaan kaloo ka soo shaqeynay hawlo kale ee ku saabsana barnaamijyo Idaacadeed oo wacyi gelinta bulshada ahaa ee dhanka “Barashada Wadaniyada iyo Madaninimada – CIVIC EDUCATION RADIO PROGRAM” oo ay maal-gelin jirtay Hay’adda UNESCO.
Ilaah caafimaad taam ah ha siiyo saxiibkey Abdullahi M. Sheegow, Abdullahi waxaan ku aqaan inuu yahay shaqsi halgame, wadani, barbaariye, saxafi, beelwade, hawlkar, asluub badan, hufan, dhowrsan iyo sifooyin kale oo aan halkan ku soo koobi karin,
Waa shaqsi hal-abuur ah oo hawsha loo xilsaaray ugu deeqa fekrado wax-ku-ool ah oo kor u qaadaya tayada hawsha warbaahinta.
Inta lagu jiray waayahan burburka wuxuu ahaa nin aan dalka dibedda uga bixin marka laga reebo hawlo muddo kooban uu wadamada deriska ah u tegi jiray.
Abdullahi, aniga iyo asxaab kale waxaan bud-dhigayaal u aheyn abuurista Hay’adda aan dawliga aheyn ee Koonfuta iyo Bartamaha Soomaaliya oo marka la soo gaabiyo la yiraa “SOSCENSA” oo ah meesha uu Abdullahi hadda ka shaqeeyo.
Halkan waxaan uga mahad celinaya gabadha lagu magacaabo Sucdi Daahir oo runti ah shaqsi si firfircoon uga shaqeysa bulshada gaar ahaan kuwooda taagta daran. Waxaan kaloo Sucdi si gaar ah uga mahad celinaya sida ay uga war qabto odaygan Soomaaliyeed iyo reerkiisa.
U soo duceeya odaygan xanuunsan inuu Ilaahey caafimaad taam ah siiyo. La share gareeya asxaabta kale ee warbaahinta ka shaqyesay iyo dadka kale ee samaha iyo wanaaga jecel.
W/Q: Cabduqaadir Walaayo